Ongakhetha kubathengi Abarhwebi- iiBhrikhi zoKhetho eziBhaliweyo ziphinde zajongwa
Okukhethwa kukho kubathengi Abarhwebi baphinde bahlaziywa
Uphengululo oluthembekileyo lweeBhanari zoKhetho lweBhinary
Beka kwaye uKhetho lweFowuni luchaziwe
Iindlela zokurhweba ngokukhetha
Uthengisa njani ngoKhetho lweBhinary?
Uhlalutyo olusisiseko kunye nobugcisa
Ixabiso elihle 1
IQ Ukhetho Uhlolo
IINKCUKACHA ZOMTHENGISI Igama Lomthengisi: IQ OptionIqonga: IQoptionYasekwa: 2013Return / Refund: up to 90% * Return and 0 to 10% Refund (Amount to be credited to account for an successful trade) Amazwe awamkelwanga: United States, Japan, Israel, Turkey, ...
Funda uhlaziyo olupheleleyo Iinkcukacha ezithe kratya +
Ukhetho lwe-IQ ngumrhwebi owahlukileyo usebenzisa isiko labo elakhelwe ngokukhetha iqonga lokuthengisa. Bangabanye babarhwebi ababalaseleyo abaziwayo, kwaye uninzi lwabantu luye lwalujonga njengesisombululo esisesona siphezulu. Ingaphezulu kokumelwa ukuba yeyiphi amaqonga orhwebo ekubambekayo anokubonakala ngathi kule minyaka izayo. I-IQ inokubizwa njenge-software ejikeleze yonke indawo eyamkela zonke iimfuno zabarhwebi, kwaye ke, yinto esinokuyicebisa ngokuzithemba.
Indawo eyongezelelweyo yeWebhusayithi
Idiphozithi kunye neNtlawulo
Iindidi ezilungileyo zokukhetha
Isinxibelelanisi sinobuhlobo kakhulu
Ubuncinci obuncinci botyalo-mali esakha sabubona
Iakhawunti yedemo ezimeleyo
Izixhobo zokufunda ezisebenzisanayo
Ukunqongophala kweNkxaso yeFowuni yasekhaya
Ii-asethi ezingaphezulu kufuneka zongezwe kwi-Asset Index yazo
Uphononongo loRhwebo lweOlimpiki
IINKCUKACHA ZOMTHENGISI Igama Lomthengisi: Olymp TradePlatform: Olymp TradeEyilwe: 2014Return / Refund: up to 92% * Return and 0 to 10% Refund (Amount to be credited to account for an successful trade) Amazwe awamkelwanga: United States, Yurophu, Canada, ...
Urhwebo lweOlimp linikezela ngeemeko zokurhweba ezilungileyo kakhulu kukhetho lokuthengisa kunye neqonga kwelinye iqonga. Isoftware yenzelwe ngobuchule kwaye kulula ukuyisebenzisa ngabaqalayo kunye nabarhwebi abaphambili. Unokwenza isatifiketi ngeendlela ezahlukeneyo njengoko ufuna. Olunye uncedo lomthengisi kukuba ungaqala ukurhweba ngediphozithi encinci ye-10 $. Kwakhona, ubuncinci botyalo-mali kurhwebo ngalunye kuphela yi-1 $.
Iqonga elihle elinokwenziwa ngokwezifiso
Idiphozithi encinci ephantsi
Oqalayo ukuba nobubele
Amaxesha okurhoxa ngokukhawuleza
Ayifumaneki kubemi base-US / EU
Ezinye iingxelo zeqonga 'elisaseleyo'
IINKCUKACHA ZOMTHENGISI Igama Lomthengisi: ExpertOption Platform: ExpertOption Eyilwe: Ukubuyiselwa / ukubuyiselwa imali kuka-2014: ukuya kuthi ga kwi-95% * Ukubuyisa kunye ne-0 ukuya kwi-10% yokubuyiselwa imali (Imali ekufuneka ifakwe kwi-akhawunti yorhwebo oluyimpumelelo) Amazwe awamkelwanga: United States, Canada, ...
Ngokubanzi, i-ExpertOption inikezela iwebhusayithi esebenziseka lula kunye neqonga kunye nothalo-mali olusezantsi, olincedayo ekubhengeni kuluhlu lwabarhwebi. Abo banomdla kurhwebo kufuneka bajonge okungenani ukusebenzisa iakhawunti yeedemo, ngakumbi ukuba into yorhwebo lwentlalo ibalulekile.
Iqonga elifanelekileyo lokuthengisa
Intlawulo ephakathi enesidima
Iiakhawunti zedemo ziyafumaneka
Indlela yokubhatala eninzi
Umgaqo weVFSC ongaqinisekiswanga
Kuphela kukhetho lwexesha elifutshane
Inani eliphezulu lokukhetha likhawulelwe
Ukukhetha komhleli 4
IINKCUKACHA ZOMTHENGISI Igama Lomthengisi: Binary.com Iqonga: iDeriv, iSmartTrader, iMetaTrader 5, iWebTrader esekwe: Ukubuyela kwi-2000 / Ukubuyiselwa imali: ukuya kuthi ga kwi-92% * Ukubuyisa kunye ne-0 ukuya kwi-10% yokubuyiselwa imali (Imali ekufuneka ifakwe kwi-akhawunti yorhwebo oluyimpumelelo) Amazwe awan .. .
I-Binary.com yenye yeendlela zokuqala zokukhetha ukubhengeza kwaye ekuhambeni kwexesha baye baxhamla kurhwebo lweFX, iCFD kunye neCrypto. Binary.com Iimveliso zotyalo-mali zilawulwa kakhulu kuyo yonke imimandla apho zinikezelwa khona.
Idipozithi encinci ($ 5)
Fowuna umva wenkxaso yabathengi
Ujongano lweshishini lokuthengisa
Ukhetho olubanzi lweendlela zokurhoxa
Iakhawunti yedemo yabasebenzisi abatsha
Ukuqhubekeka kwesipaji seNet kungathatha iintsuku ezingama-3-5
Olukhetho olunambambili luhlobo lwezinto onokukhetha kuzo kurhwebo apho konke kungabikho okanye akukho. Ngenxa yezi mpawu, iinketho zokubini ziya kuba lula ngakumbi ukuziva kunye nokukhetha urhwebo xa kuthelekiswa nokukhetha ngokwesiko. Into ebambekayo ...
Amaxesha amaninzi, abathengisi banokutsiba kwimidlalo yokhetho ngaphandle kwemvelaphi okanye ngokuqonda okuncinci ngeendlela ezahlukeneyo zokurhweba ezikhoyo. Abazi nokuba zingaphi iindlela onokukhetha kuzo ...
Beka ukhetho kwaye utsalele umnxeba ukhetho lokurhweba ngenene kulula kwaye kunenzuzo kunokuba abantu abaninzi bebecinga. Ukuqala, iinketho zahlulwe zangamacandelo amabini, iminxeba kunye nokubeka. Iminxeba inyuka ngexabiso ukuba ukhuseleko olusisiseko ...
Ukurhweba kukhetho lwebhinari kuphakathi kweendlela ezilula zokurhweba ukuhla kwamaxabiso kwimarike ezininzi zehlabathi. Nangona kunjalo, umrhwebi kufuneka aqonde ukuba kukho umngcipheko obandakanyekayo kule ndlela yokuthengisa ngakumbi ukuba awuqhelananga nendlela ...